सोनीका रोकायाले ध म्कि दिएको राम गौतम आए मिडियामा, यस्तो रहेछ भित्रि कुरा (भिडियो) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सोनीका रोकायाले ध म्कि दिएको राम गौतम आए मिडियामा, यस्तो रहेछ भित्रि कुरा (भिडियो)
सोनीका रोकायाले ध म्कि दिएको राम गौतम आए मिडियामा, यस्तो रहेछ भित्रि कुरा (भिडियो)
5,242 1 minute read
काठमाडौँ, १ भदौ । चर्चित मोडल तथा वि वादित युट्युबर सोनिका रोकाया विभिन्न ह र्क त गर्दै चर्चा र आ लो च ना को घेराबन्दीमा परिरहन्छिन । यस्तै उनी फेरि रुदै आफ्नो फेसबुक लाइभमा आएकी छन् । युट्युबको माध्यम हुँदै युवापुस्ता माझमा निकै लोकप्रिय बनेकी उनी यो पटक लाईभमा निकै आ क्रो शि त भएकी देखिन्छ । उनको आ क्रो श सबै प्रती भन्दा पनि एक ब्यक्ति प्रती लक्षित देखिन्छ ।
उनले राम गौतमको नाम लिदै ज था भा वी अ श्ली ल शब्दहरू बारम्बार प्रयोग गरेकी छन् । तर, राम को हो ? उनले के गर्यो ? किन यसरी आ क्रो शि त भए ? भन्ने बारे भने लाईभमा खुलेको छैन । तर, उनको लाईभमा देखिएको आ क्रो श बाट बुझ्न सकिन्छ उक्त ब्यक्तिबाट रोकायालाई निकै ट च र दिइएको छ ।
एक्कासी लाइभमा आएर यस्ता कुराहरु भन्नु या यसरी प्रस्तुत हुनु उनि आफैमा लज्जाको कुरा हो । उनले राम गौतमको क र्तु त बाहिर ल्याउछु भन्दै गो लि हा न्छु सम्म भनेकी छन् । आफ्नो आमाले फेसबुक लाइभ रोक्न खोज्दा आमालाई नै गा ली गरेको लाइभमा देख्न सकिन्छ । पैसा ठुलो होइन मानवता ठुलो हो, म पागल हो, मेरो कारणले एउटा मान्छे म र्दै छ भन्दै विभिन्न कुरा गर्दै लाइभ आएकी हुन् ।
यसै बीच राम गौतम पनि मिडियामा आएर घ टना बारे बोलेका छन् । राम गौतमका अनुसार उनीहरुको बीच आर्थिक लेनदेनको वि वाद रहेछ । सोनीकाले भिडियो इडीटको काम गरेबापत पैसा नदिए पछी गौतमले सोनीकाको कम्प्युटर लागेपछि सोनीका आ क्रोशित भएको गौतमको भनाई छ । सामाजिक संजालमा आ क्रोशित भएकी सोनीकाले रामले गरेको गल्ति बारे केहि नबोलेको हुनाले उनको भनाई भने आउन बांक्की छ । भिडियो हेर्नुहोस ।